Shirkadda Isgaarsiinta Shiinaha waxay soo bandhigeysaa awood dhameystiran oo ku saabsan amniga internetka-News-Ningbo Joiwo Qarax caddeyn u ah Teknolojiyada Co., LTD
Shirkadda Isgaarsiinta ee China Telecom waxay soo bandhigeysaa awood buuxda oo xagga amniga internetka ah
WAQTIGII: 2020-09-23 HITS: 22
"Kaabayaasha Cusub, Amniga Cusub, Mustaqbalka Cusub" Shiinaha Telecom Waxay muujineysaa Awoodda Guud ee Amniga Internetka.
Toddobaadka "Toddobaadka Amniga Shabakadda" oo laga bilaabay waddanka oo dhan laga bilaabo Sebtember 14 illaa 20 ayaa soo jiitay indhaha shabakadda oo dhan. Waqtigan xaadirka ah, kaabayaasha cusub sida shabakadda 5G, xogta weyn, sirdoonka macmalka ah, kumbuyuutarrada daruuriga ah, iyo Internet-ka Waxyaabaha ayaa si aad ah isugu xidhan bulshada iyo dhaqaalaha, waxayna u noqon doonaan matoor muhiim u ah horumarka dhaqaale ee tayo sare leh ee dalkayga. Si kastaba ha noqotee, tiknoolajiyada cusub waxay sidoo kale keenaan caqabado cusub amniga shabakadda. Bandhiggan, Shiinaha Telecom wuxuu ku muujiyey awooddiisa dhammaystiran xagga amniga shabakadda illaa lix qaybood oo waaweyn: 5G network network Cloud, "anti-fraud", iyo smart home.
Lix qaybood oo waawayn ayaa galbinaya nabadgelyada internetka qaab wareegsan
Tan iyo markii ugu horreysay "Toddobaadka Amniga Internetka" la qabtay 2014, waxay noqotay toddobaad. Toddobaadka Amniga Toddobaadka ee Sannadkan wuxuu ku saleysan yahay waxqabadyada khadka tooska ah, isku-darka waxqabadyada khadka tooska ah iyo kuwa qadka ka baxsan Kuwaas waxaa ka mid ah, waxqabadyada khadka tooska ah waxaa qabanqaabiya shirkadda Shiinaha ee Telecom. Iyadoo hal-ku-dhigga ah "Kaabayaasha Cusub, Amniga Cusub iyo Mustaqbalka Cusub", waxay sidoo kale soo bandhigaysaa awoodda Shiinaha Telecom ay ku galbineyso amniga shabakadda dhammaan dhinacyada iyada oo loo marayo lix qaybood oo waaweyn.
Lixdaan waaxood waa amniga shabakada oo ka faa'iideysanaya hab-nololeedka dadka, 5G dariiqa shabakadda kaabayaasha cusub, kahortagga khayaanada shabakadda, ilaalinta macluumaadka shaqsiyadeed, tikniyoolajiyad cusub iyo barnaamijyo cusub, iyo amniga dalabyada guryaha.
Kuwaas waxaa ka mid ah, codsiyo kala duwan oo xagga amniga ah oo shabakadda amniga ka faa'iideysanaya qaybta hab-nololeedka dadka ayaa ka caawin doonta dadka isticmaala taleefannada gacanta inay siiyaan xaqiijin iyo ka hortag sax ah marka la eego amniga wicitaanka, amniga gaarka ah ee taleefannada gacanta, iyo halista ka-baxsiga macluumaadka shakhsiyeed ee APPs; qaybta kaabayaasha shabakada daruuriga 5G cusub waxay muujineysaa habka maaraynta Shiinaha Telecom ee daruuraha, shabakada indhaha, AI, amniga, ICT, terminal iyo dhinacyada kale si loo hubiyo daruuraha iyo amniga macluumaadka; aagga bandhigga musuqmaasuqa ee kahortagga shabakadda wuxuu adeegsadaa kiisaskii ugu dambeeyay ee khiyaanooyinka shabakadda si loo muujiyo in Shiinaha Telecom ay xoojineyso maamulka ilaha iyo hirgelinta Ka-hortagga iyo xakamaynta qaab farsamo, dhiirrigelin iyo xusuusin, iwm, si kor loogu qaado wax-ku-oolka maareynta khayaanada; labada adeeg ee Tianyi Anti-dhibaateyn iyo Jawaab Sirdoon oo lagu soo bandhigay qeybta ilaalinta macluumaadka shaqsiyeed waxay xaqiijineysaa inaysan jirin wax xadgudubyo ah oo sharciyada iyo qawaaniinta u ah aruurinta iyo adeegsiga macluumaadka shakhsiyeed ee isticmaalaha; teknolojiyad cusub iyo qeybta dalabka cusub Natiijooyinka la soo saaray ayaa u badan badeecadaha AI iyo xalal daboolaya baahiyaha adag ee warshadaha, isla markaana kor u qaadaya tartanka asaasiga ah ee ka hooseeya "5G + Cloud computing + data great + AI" seenyo, taas oo ah mid ka mid ah udub dhexaadka dhismaha kaabayaal cusub.
Maadaama uu yahay hogaamiyaha kaabayaasha dhaqaalaha xilligii "Internet +", Shiinaha Telecom wuxuu had iyo jeer muhiimad weyn siiyaa dhismaha iyo maalgashiga aagga amniga shabakadda. Horaantii 2007, Waaxda Maareynta Nabadgelyada Shabakada iyo Macluumaadka waxaa la aasaasay. Kani waa koox heer hoggaamineed oo amniga macluumaadka shabakadda ah oo hoos imanaya hoggaamiyeyaasha ugu waaweyn kooxda. Isla mar ahaantaana, kooxda iyo xarumaha hawlgalka laba-heer ee gobollada ayaa la aasaasay. Xarunta ka shaqeynta macluumaadka.
Si loola jaanqaado horumarka joogtada ah ee teknolojiyadda macluumaadka loona xaqiijiyo amniga kaabayaasha cusub, sanadka 2019, China Telecom waxay tirtirtay asalkeedii hore "Waaxda Maamulka iyo Maareynta Amniga Amniga" waxayna aasaastay "Waaxda Maamulka iyo Maareynta Amniga macluumaadka". Labada waaxood waxay u muuqdaan inay isku mid yihiin, oo mid uun baa jira. Micnaha eraygu aad ayuu u kala duwan yahay. Qeybtii hore ee amniga shabakada waxaa si wada jir ah loogu qorey waaxda howlaha iyo dayactirka shabakada, halka waaxda amniga ee shabakada cusub ee la aas aasey sanadkii la soo dhaafey ay tahay waax madaxbanaan oo gudata waajibaadkeeda waaxda howlaha iyo dayactirka shabakada waana mid ka madax banaan midba midka kale. Sannadkan, Shiinaha Telecom wuxuu aasaasay Shirkadda Yundi si ay mas'uul uga ahaato R&D iyo howlgelinta wax soo saarka "Telecom Yundi", isla markaana ay u maareyso maamulka ganacsiga ee Waaxda Maareynta Amniga Shabakadda iyo Macluumaadka.
Intaas oo keliya maahan, Shiinaha Telecom wuxuu sidoo kale si adag uga shaqeynayaa dhismaha koox tayo hiil amni leh, sameynta koox aasaasi ah xulista tayada macluumaadka shabakadda, khubaradan ayaa ku raaxeysta gunnooyinka, iyadoo loo marayo kooxda tayada si loo hubiyo in nidaamka amniga macluumaadka shabakadda lagu meel mariyo.
Intaa waxaa dheer, Shiinaha Telecom wuxuu sidoo kale dejiyay tallaabooyin maareyn dhameystiran oo ku saabsan shuruucda iyo xeerarka, oo ay ku jiraan maareynta macluumaadka aasaasiga ah ee amniga internetka, qorshooyinka wax ka qabashada khatarta, iyo maaraynta xirxirka ee dhacdooyinka amniga khatarta si loo hubiyo in amniga internetka iyo amniga macluumaadka ay jiraan.
Dhisida nidaam deegaan oo dhameystiran
Adiga oo riixaya kaarka kumbuyuutarka super, adoo abuuraya nidaam amni oo macluumaadka qoyska "1 + 3 + 4", adoo adeegsanaya barmaamijka Yundi si aad u soo saarto alaabada "aaminka ah ee qadarka leh" ... Dhismaha amniga ee shirkadda isgaarsiinta Shiinaha Telecom waxaa ka mid ah nidaamka oo dhan shakhsiyaadka, qoysaska. warshadaha.
Gaar ahaan xilligii 5G, xisaabinta daruuraha, xogta weyn, iyo warshadaha sirdoonka farsamada ayaa kor u kacaya. Shiinaha Telecom wuxuu leeyahay shabakadda ugu weyn ee laf-dhabarka IP-ga waddanka, caymiska shabakadaha indhaha ee heer qaran ayaa aad u horreeya, ilaha IDC-ku waa kuwa ugu badan waddanka, bandwidth-ka caalamiga ah ee dhoofinta ayaa ugu sarreeya.
Tani waxay sidoo kale keenaysaa khataro badan oo suurtagal ah amniga shabakadda. Si taas loo gaaro, bishii Maajo ee sannadkan, Shiinaha Telecom wuxuu soo saaray "5G SA Security Enhanced SIM Card Paper Paper." Waraaqda cad waxay ku dareysaa nidaamka SUCI iyo farsamada GBA, oo ku saleysan shabakadda SA core, oo ku wajahan codsiyada warshadaha sida wax soo saarka caqliga leh, iyo la kulanka shuruudaha sare u qaadista amniga.
Waxaa ka mid ah, marka la eego internetka warshadaha, Shiinaha Telecom wuxuu dhisay jawi nabadgelyo oo la maareyn karo, la maareyn karo, laguna kalsoonaan karo, wuxuu u adeegsaday Yundi si uu u dhiso shabakad aasaasi ah oo aamin ah oo loogu talagalay hawlwadeennada, wuxuuna galbiyay amniga shabakadda in ka badan 40 qaran. dhacdooyinka. Dhismaha iyo hawlgalinta ku dhowaad 10 aaladaha wacyi gelinta xaaladda amniga ee gobolka waxay bixiyaan adeegyo amni oo APP ah oo xagga amniga ah.
Intii lagu gudajiray aafada, si loo hubiyo amniga isku xirnaanta dowladda, caafimaadka iyo caafimaadka, adeegyada bulshada iyo warshadaha waxbarashada, iyo shirkadaha, isla mar ahaantaana, si loo hubiyo amniga iyo kalsoonida barashada internetka iyo xafiiska fog, Shiinaha Telecom's Yundi Barxada ilaalinta amniga shabakadu waxay fulin doontaa hawlgalka "ilaalinta" waxayna isku dhafan doontaa dhamaan shabakada Zili waxay bixisaa adeegyo nabadgelyo oo heer sare ah oo bilaash ah, oo aan eber lahayn, oo loogu talagalay nidaamyada ganacsiga iyo barnaamijyada ilaha dadweynaha ee arrimaha dawlada, caafimaadka iyo caafimaadka. warshadaha.
Waqtigan xaadirka ah, Shiinaha Telecom wuxuu u adeegsaday barnaamijka Yundi si uu u bixiyo kormeerka weerarka shabakadda bilaashka ah, kormeerka degellada, iyo adeegyada degdegga ah ee 210 waaxyaha dowladda, caafimaadka, waxbarashada, iyo adeegyada dadweynaha ee dhammaan heerarka dalka oo dhan.
Ningbo Joiwo ayaa ku takhasusay telefoonka warshadaha in ka badan 15 sano.
Waxaanan baareynaa taleefan nooc cusub ah oo ku saleysan taleefanka warshadaha.Waxaa loo isticmaali karaa tunnel, badda, oi, gas, dock, warshadda kiimikada, sibidhka, maxbuuska jeelka, bannaanka iyo wixii la mid ah.
Nala hadal wixii ku saabsan dhismaha nidaamkaaga taleefan ee isgaarsiineed ee kala duwan.
Maxay yihiin taxaddarrada isticmaalka is-dhexgalka?
Maxay tahay sababta ay Huawei uga badinayso Apple IPHONE?